Hambalyo Aroos – Kaasho Maanka
Maalin dhaweyd buu nin xajka in uu aado rabey waxaa uu arkay diyaarad cagaaran oo geed hoostiis taal. Geedku higlo ayuu ahaa, waxaa ayna diyaaraddu hoostiisa kaga dhuumatay saddex faras oo gadgaduudan, oo geedka duleedkiisa ka cabbayey biyo qabow.
Xaajigu fardaha iyo biyaha uma uu jeedin, ee waxaa uu arkay diyaaradda cagaaran oo dhabbacan geedka hoostiisa. Higlo waa geed uu midabkiisu madow iyo cagaar isku jira yahay, oo ay diyaaradaha jinku hoostiisa kaga dhuuntaan fardaha jinka.
Haddii ay fardaha jinku arkaan diyaaradaha jinka waxaa shirkaddii jinka oo diyaaradda lahayd la ganaaxaa labo kumi iyo taano lacagta jinka ah. Haddii uu faraska diraayadda arkay irmaan yahay ganaaxu waa labojibbaar, oo waa sumuli dhan.
Bayloodkii diyaaraddu markii ay diyaaraddu fariisatay buu geedkii higlada ahaa fuulay, oo laamo caleemo badan dhexdood buu ku dhuuntay si aysan farduhu u ganaaxin. Higlada caleemeheeda qolo jin ah oo tirokoobay waxaa ay ku sheegeen afar kun iyo shan boqol oo caleemood, laakiin markii ay diyaaraddu degaysey baa waxaa ka daatay afartan iyo saddex caleemood.
Bayloodka jinka ahi gacan buu geedka ku cuskan yahay, gacanna waxaa uu ku haystaa tusbax madow oo uu hoos u laalaadinayo. Waxaa uu afka ku hayaa oo uu tusbaxa ku tirinayaa wardi duco ah oo uu Rabbi ka baryayo in aysan fardudu ganaaxin shirkadda diyaaradda leh.
Labada gacmood oo jinka midina bidix ma ay aha, oo labaduba waa midig, laakiin jinka labka ah labadiisa xaniinyood mid baa bidix ah oo xaniinta midig baa ragannimada jinka badankeeda fulisa. Jinka dhaddig laftiisa labadiisa naas mid baa midig ah oo waxaa caano badan naaska midig, waxaana dareen badan naaska midig oo gabar jin ah haddii lala cidloodo waxaa habboon in naaskeeda midig aad iyo aad loo salaaxo.
Xaajiga insiga ah oo diyaaradda arkay iyo bayloodka jinka ah indhohoodu isku nooc ma ay ah, oo haddii ay cirka eegaan waxaa xaajiga u muuqda cir baluug ah iyo daruuro uu midabkoodu cawl iyo caddaan yahay. Waxaa kale oo u muuqda qorrax uusan indhaha u dhammayn karin oo uusan si fiican u fiirin karin oo kulul oo aad u cad.
Jinka indhihiisu midabka baluugga ah ma ay qabtaan, oo cirka jinku waa uu gaduudan yahay, isla markaas daruuruhu waxaa ay ula eg yihiin ”saliid macasaro”. Qorraxdu indhaha jinka waxba uma ay dhinto oo waxaa ay ula eg tahay caano dhay ah, waxaana jinka har iyo habeen cirka uga muuqda xiddigo badan oo badan.
Tusbaxa jinka oo geedka ka lusha ayuu xaajigu indhaha la raacay, waxaana u muuqday baylood jinni ah oo xiran dabogaab kaaki ah iyo funaanad dhaxameed madow. Xaajigu waxaa uu yiri: ”Ma cawo barideen?”.
Fardhihii biyaha cabbayey baa isku mar madaxyada kor u qaaday, oo waxaa ay soo eegeen geedka xaggiisa. Nasiib darro waxaa ay arkeen diyaaradda cagaaran oo higlada hoosteeda dhabbacan.
Fardihii oo soo yaacay markii uu xaajigu arkay buu waxaa uu go’aan ku gaarey in uu sanadkaan xajka ka baaqdo oo uu fardaha dhaco. Xaajigu waxaa uu ku farxay fardaha fiicfiican oo baarriyaasha ah oo xaggiisa u soo ordaya, bayloodkuna waxaa uu ogaadey in la ganaaxayo sumuli lacagta jinka ah, waayo waxaa fardaha u soo horraysa geenyo irmaan.
Faras lab oo geenyada ka danbeeyey baa waxaa uu la soo baxay qalin qaali ah iyo waraaq, waxaa uuna qoray in sumuli dhan ay shirkaddu bixiso. Xaajigii waa uu qarracmay, waayo fardaha wax qoraya markii uu arkay buu ogaadey in uu ku jiro degaan uu jin leeyahay. Fardihii uu dhaci lahaa ayaga oo qoslaya ayey meeshoodii ku laabteen, oo waxaa ay cabbayaan biyo xareed ah, isla markaas bayloodkii oo murugaysan baa waxaa uu ka soo degey geedkii higlada ahaa, waxaa uuna bayloodkii xaajiga ku yiri: ”Reer baadiye ayaad tahay, waayo waxaas oo ganaax ah adiga ayaa shirkadda u soo jiidey”.
Diyaaradda guradeeda ayuu xaajigii eegay mase waxaa saaran gabar qoslaysa oo jin ah. Markii uu gabadha u qoslaysa arkay buu fardihii illaawey, waayo waxaa uu xaajigu jecel yahay dumarka fanaxda leh. Af aysan weligeed sigaar ku cabbin bay ku qoslaysaa. Naagaha jinka waxaa ka xaaraan ah sigaarka, jaadka iyo ookiyaalaha. Xaajigu xaj iyo fardo midna ma uu xasuusto, ee waxaa uu ku dhaygagay gabadha fiican oo kubabka qaawan.
Naaseheeda waxaa la moodaa labo bakeeri oo la genbiyey, indheheeduna waxaa ay u eg yihiin labo karbuuno oo isku mar la daaray. Surkeeda waxaa la moodaa daasad khamro ah, ilkaheeduna waxaa ay u eg yihiin caano dhay ah oo sonkoraysan. Carrabkeeda waxaa la moodaa xalwad cusub, bushumeheeduna waxaa ay u eg yihiin jukulaad. Timeheeda waxaa la moodaa qaansoroobaad, wajigeeduna waxaa uu la mid yahay barlammaan federaal ah.
Xaajigii xajka u socdey waxaa uu garab fariistay gabadhii, waxaana la duushay diyaaraddii jinka. Bayloodkii baa markii ay diyaaraddii hawada gashay waxaa uu yiri: ”Xaggee baad u socotaa?”. Xaajigii asaga oo uu qalbigiisu gabadha la jiro, oo aan waxa uu sheegayo maqlayn buu waxaa uu yiri: ”Xajkii”!
Gabadhii waxaa ay fahamtey in uu xaajigu ka helay oo uu inshaa Allaahu jeclaan doono, waxaa ayna ku soo jiifsatay xaajiga dhabtiisa. Dumarka jinku suuro iyo isyeelyeel ma ay yaqaanniin, oo ninkii ka hela haddii ay ayaguna ka helaan markiiba dhabtiisa ayey ku seexdaan ama gacanta ayey qabsadaan ama garabka ayey qabsadaan. Gabar jin ah oo saaxiib lala noqdaa waxaa ay ka faa’iido badan tahay saddex kun oo naagaha insiga ah in isku mar lala saaxiibo.
Xaajigu waxaa uu qabaa labo xaas oo soomaali ah, weligiisna dhabtiisa midina kuma ay jiifsan. Mid walaalkiis buu ka dumaaley, oo waxaa ay habeen kasta ku caydaa in ninkeedii dhintay uu asaga ka fiicnaa, oo uusan xaajigu macne lahayn. Midda kale markii ugu horraysey oo uu bartay aad bay u suuro iyo been badnayd oo aad bay xaajiga u dhibtay, dabadeedna waxaa ay ku dhibtay arooskii iyo aqalgalkii, waxaa ayna ka soo jeedaa reero socod xun oo uusan xaajigu ku farxin sida ay ula soo xariiraan. Labadooda midna ma uu jecla, oo waxaa uu carruurta uga dhalaa oo uu niyadda ku dhistaa in uusan markii uu la hurdo sino ku dhex jirin, ee uu guur ku sheeg xalaal ah ugu galmoodo. Xalaashaas ma aha ee sida kale oo dhan waxaa uu dareemaa in uu khasaaray, oo uu noloshii adduunka ka qaday. Sababta uu xajka u aadi lahaa waa in uu naago jannada aakhiro lagu sheegay raajiciyo.Waxaa uu ogaadey in haddii aakhiro uusan jannada dumar ka helin uu labada daaroodba seegay, waayo xaasaska soomaalida ah oo uu qabaa ugama ay duwana in uu naar ku jiro. Labadooduba hadalka si caadi ah uma ay fahmaan oo waa ay dhoohan yihiin. Alxamdu lillaahi! Gabadha jinka ahi aad bay ku faham fiican tahay, oo xaajigu labadiisii xaas mar hore ayuu ka raystay, waxaana weli la hadlaya bayloodkii oo leh: ”Xajkaaga ma aha ee iska bixi lacagtii diyaaradda”.
Xaajigii waxaa uu jeebka ka soo saaray boqol doollar, waxaana mar kale la hadlay bayloodkii oo ku yiri: ”Sallacalee! Lacag jin ma haysid miyaa? Waa maxay lacagta insiga oo aad dhuunta naga soo gelinaysaa?”. Bayloodku hadalkii ayuu sii watay, waxaa uuna yiri: “Ma maanta ayaa kuugu horraysa in aad raacdid diyaarad ay shirkad jin ahi leedahay?“. Intii uusan xaajigii jawaabin buu bayloodkii waxaa uu yiri: “Haddii ay markii kuugu horraysey tahay waa lacag la’aan, ee aan kuu sarrifo lacagta insiga, waayo haddii aad magaalada jinka la gashid waa koontrabbaan oo waa lagugu xiri doonaa“.
Gabadhu waxaa ay la yaabban tahay bayloodka beentiisa, maxaa yeelay lacagaha insigu siiba doollarka maraykanka waxaa lagu kala sarriftaa suuqyaga iyo bangiyada ugu waayeyn magaala madaxda jinka Soomaaliya.
QORMO LA XIRIIRTA: Aniga iyo Qabyaaladda!
Xaajigii waxaa uu jeebka ka soo saaray kun doollar, waxaana ka qabtay bayloodkii oo yiri: ”Ma intaas ayaad magaalo jin oo ay hoteelladeedu qaali yihiin ugu soo safartay?”, waxaana iscelin weydey gabadhii oo tiri: “Xaajigu aniga ayuu ii casuman yahay, aniga ayaana u sarrifi doona lacagtiisa ee u soo celi!“, waxaa ayna xaajiga ka qandhuufatay bawdada si uu u dareemo in uu bayloodku rabo in uu lacagta qiimo kaga sarrifto. “War dhammaaday weeye“ ayuu bayloodkii ku jawaabey, waxaa uuna asaga oo lacagtii soo taagaya yiri: “Laakiin ninku haddii uu adiga kuu casuuman yahay waa in la bixiyaa lacagtii diyaaradda, waayo qofkii jinka casumaad ka hela waxaa kharashkiisa qaba jinka“. Gabadhii waxaa ay boorsadeeda ka soo bixisay sumuli lacag jin ah. Waa markii ugu horraysey oo uu xaajigu arkay lacag jin, waxaana lacagtii khaanadda ku ridey bayloodkii oo aan baaqi soo celin ee yiri: “Xaajiga haddii aad hoteel ku casumaysid aniga ayaa hotel fiican haya ee i raaca, laakiin haddii aad guri geynaysid waa aad fasaxan tihiin“. Gabadhii waxaa ay tiri: “Dhegayso saaxiib! Adigu ma shirkad diyaaradeed baad u shaqaysaa mase shirkad hoteello leh?“. Hadalkii intaas ugama ay harin ee waxaa ay tiri: “Maxaa xaajiga martida ii ah iyo aniga noo kaa afduubay; sow xor ma aannu ahin?“.
Bayloodkii hadalkiisii xoogaa buu ka shallaayey, laakiin qosol been ah buu ku qarsaday murugadii iyo naxdintii, waxaana uu hadal lagu mashquulo ka dhigtay “Alla xaajigu nasiib badanaa! Haddii aysan fardihii ganaaxu jireen ma uu heleen fursaddaan qaaliga ah oo ay gabadhu gurigeeda ku casumi doonto“.
Diyaaradaha jinku waxaa ay ku socdaan xawli la mid ah midka ay sharqantu ku socoto, oo sidaas darteed waxaa ay cago dhigatay xaajigii oo aan dareemin in markii ay kacday laga soo wareegey xilli safar. Waxaa diyaaradda shirkeeda fadhiya bayloodkii oo funaanad dhaxameeddii iska siibey oo feero qaawan. Waxaa uu qabaa dabo-gaab keli ah, waxaa uuna sii eegayaa xaaji ku xarragoonaya bakoorad gaduudan iyo koofiyad cad, oo ay garabka haysato gabar jin ah oo boorso baroon ah laalaadsanaysa.
“Dhegaysta! Waa xaajiga iyo saaxiibtiis!“ ayuu asaga oo qaylinaya ka daba yiri, waxaana isku mar soo wada eegay labadii qof oo degdegsanaa, waxaa uuna markii ay soo fiiriyeen xaggooda u soo tuuray tusbaxii madoobaa oo markii uu fardaha ganaaxa ka baqayey uu ducada ku akhriyey, waxaana uu yiri: “Tusbaxaas ku wardiya markii aad xaafadda isla tagtaan, oo igu soo xasuusta“.
Xaajigu waxaa uu ku sigtay in uu tusbaxa dhulka ka qaato, laakiin waxaa uga hormartay gabadhii, oo inta ay bayloodka xaggiisa tusbaxii xoog ugu soo tuurtay tiri: “War belaayo ku xasuusatay ee ammaan na sii!“.
Bayloodkii waxaa uu jeclaa in uu kaftan iyo cayaar sii wado, laakiin mar danbe xaajiga iyo saaxiibtiis ma ay soo eegin. Tusbaxii diyaaradda hoosteeda ayuu ku dhacay, labadii ruux oo isu martida ahaana garoonkii diyaarada waa ay ka baxeen.
Dhul doog ah bay labadoodii oo garabka isku dheggani sii xulayaan, waxaana toos loogu jeeda cimaamadda cad oo xaajiga garabka u saaran iyo dabogaabka cad oo gabadha. Korkooda waxaa hoganaya daruuro madmadow, oo ay hoostooda duulduulayaan shinbiro badani. Qorraxdii sii dhacaysey waxaa ay ku qarsoontay buur weyn oo magaalada jinka duleedkeeda ku taal, labadoodiina waxaa ay ku yaryaraadeen dabaqyo jin oo muraayado ah iyo geedo waaweyn dhexdood.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 3rd January 2005